Meituan Q3 ၏ ဝင်ငွေ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇. ၆ ဘီလီယံ ရှိသည်။ နှစ်စဉ် ကုန်သွယ်မှု အသုံးပြုသူ ၆ ၆၇. ၅ သန်း - Pandaily
သောကြာ နေ့မှာအမေရိကန် အုပ်စုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ် ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ။ ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၄၈. ၈ ၂၉ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇. ၆ ဘီလီယံ) သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကထက် ၃၇. ၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန် တပ်ရင်း ၏ သုံးလ တစ်ကြိမ် R & D အသုံးစရိတ် သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်ခဲ့ပြီး ယွမ် ၄. ၇ ဘီလီယံအထိ တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် ချိန်ညှိ ထားသော EBITDA နှင့် အသားတင် အမြတ် နှစ်မျိုးလုံး သည် တစ်နှစ် ပြီး တစ်နှစ် တိုးတက်မှုနှုန်း ကိုပြသ ခဲ့ပြီး အနှုတ် ၄. ၁ ဘီလီယံ ယွမ် နှင့် အသားတင် အရှုံး ၅. ၅ ဘီလီယံ ယွမ် သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
သို့သော်ဤ သုံးလပတ်တွင် လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း Meituan ၏နှစ် စဉ် ကုန်သွယ်မှု သုံးစွဲသူ အရေအတွက်သည် စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး သန်း ၆၇ ၀ အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်း သုံးစွဲ သူများ၏ သုံးစွဲမှု အကြိမ်ရေ မှာလည်း ဆက်လက် မြင့်တက် နေပြီး သုံးစွဲသူ များ၏ပျမ်းမျှ နှစ်စဉ် အရောင်းအ ၀ ယ် အရေအတွက်သည် ၃၄. ၄ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဤ ကိန်းဂဏန်းများအရ သုံးစွဲ သူများသည် ကုမ္ပဏီ ၏အက် ပလီကေးရှင်း မှတစ်ဆင့် အမှာစာ ၂၃ ဘီလီယံ ခန့် ရှိသည်ဟု ဖော်ပြသည်။
ယခု သုံးလပတ် ကာလအတွင်း အမေရိကန် တပ်ရင်း သည်၎င်း၏ စာပို့ သူများအတွက် နောက်ထပ် အကျိုးကျေးဇူး များ ပေးခဲ့သည်။ စာပို့ သူများ၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ၀ င် ငွေကို သေချာ စေရန်၊ အလုပ် ပြင်းထန်မှု စံနှုန်းများကို သိပ္ပံနည်းကျ ဖော်ထုတ် ရန်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ခံစားခွင့် များကို တိုးတက်စေ ရန်။ ထို့အပြင် အမေရိကန် အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတစ် ဝှမ်း ရှိ စာပို့ သူ တုံ့ပြန်ချက် အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ၁၁၀ ကျော် ကျင်းပ ခဲ့သည်၎င်း၏ အမှာစာ အချိန်ဇယား ဆွဲခြင်း စနစ်၏ ပွင့်လင်းမြင်သာ မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာ မှုကို တိုးတက်စေ ရန်။
Meituan ကိုတည်ထောင် သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Wang Xing က “ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ် မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် မိတ်ဖက် များအား သူတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် နှင့် အွန်လိုင်း လည်ပတ်မှု တိုးတက်စေရန် ထပ်မံ အားဖြည့် ပေး လိမ့်မည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူမှုရေး တာဝန် များကိုလည်း စိတ် ထဲ စွဲမှတ် ထားကာ အမျိုးသား စီးပွားရေး ၏ အရည်အသွေး မြင့် တိုးတက် မှုအတွက် နောက်ထပ် အထောက်အကူပြု မည် ဖြစ်ကာ ပိုမို ကြီးမားသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ပါဝင် ကူညီ သွားမည် ဖြစ်ကာ” ပြည်သူများကို ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ စားသောက် နေထိုင် နိုင်ရေး ကူညီ မည် “ ဟူသော တာဝန်ကို ကျေပွန် စွာ ထမ်းဆောင် ခြင်းအားဖြင့်” ဘုံ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ မှု “ ၏ ရည်မှန်းချက်ကို ထောက် ကူ ပေး သွားမည်” ဟု ဆိုသည်။
စားသုံးသူ ဝယ်လိုအား မြင့်တက် လာသည်နှင့်အမျှ ယခု သုံးလပတ်တွင် Meituan သည် စားသုံး သူများအား မြို့ကြီး ၁၅ မြို့ ကျော်မှ ည ဥ ့် နက် သော မုန့် ကုန်သည် များ အတွက်အထူး အရောင်း မြှင့်တင် မှုများ ပေးခဲ့သည်။ ဤ စိတ်ကူး သည် နွေ ရာသီတွင် အထူးသဖြင့် ရေပန်းစား သည်။
ထို့အပြင် အမေရိကန် အုပ်စုသည် လေး ပုံတစ်ပုံ လုံးတွင် မောင်း သူမဲ့ ဖြန့်ဖြူး ရေး နယ်ပယ် ကိုဆက်လက် စိုက်ပျိုး ခဲ့သည်။ Shenzhen Bay SIC Super ဌာနချုပ် စင်တာ နှင့် Shanghai Jinshan ခရိုင် တို့နှင့် ရှေ့ပြေး သရုပ်ပြ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စာချုပ် များကို ကုမ္ပဏီက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အနာဂတ်တွင် Meitang သည် လာမည့် နှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် Jinshan ၌ စစ်မှန်သော အသုံးပြု သူများအတွက် စမ်းသပ်မှု လမ်းကြောင်း တစ်ခု ဖွင့်လှစ် ရန်စီစဉ် နေသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Meituan ၏ပထမဆုံး မြို့ပြ အနိမ့်အမြင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စစ်ဆင်ရေး သရုပ်ပြ စင် တာကို ရှန်ဟိုင်း တွင် အခြေချ ခဲ့သည်
Meituan City ၏အ နိမ့် အမြင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကွန်ယက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း များ၏ ၉၀% ကျော်ကို ကုမ္ပဏီမှ သီးခြားစီ တီထွင် သည်။ လက်ရှိတွင် Meituan မောင်း သူမဲ့ လေယာဉ် ကို ရှန်ကျန်း တွင် တစ်နှစ် နီးပါး စမ်းသပ် ခဲ့ပြီး မြို့၏ ဒေသ ၇ ခုရှိ အိမ်ထောင်စု ၈၀၀၀ ကျော် အား ချက်ချင်း ဖြန့်ဝေ ပေးသည်။